Kim Little - BBC Somali
30 Abriil 2015
Little oo u dhalatay Scotland ayaa sanad aad u wanaagsan ku lahayd horyaalka qaran ee kubadda cagta ee haweenka Mareykanka, halkaasi oo ay ka dheeleysay khadka dhexe oo weerar ah.
Waxa ay noqotay cayaaryahannada ugu goolasha badan sanadkaasi, iyadoo dhalisay 16 gool, taas oo noqotay rikoor cusub, waxaana sidoo kale saddex jeer loo codeeyay in ay tahay cayaaryahanka bisha. Xilli cayaareedkaasi waxa ay noqotay cayaaryahannada ugu qiimaha badan, kaddib markii kooxdeeda Seattle ay gaareen cayaarta kama dambeysta ah, balse ay kaga guuleysatay kooxda Kansas.
Inkastoo ay 24 jir tahay, waxa ay xirfad ahaan kubadda dheeleysay tan iyo 2006-dii, waxaana sanadkii 2013-ka uu ururka haweenka xirfadlayaasha kubadda cagta u aqoonsaday cayaaryahannada sanadkaasi. Balse waxaa niyad jab ku ah in Scotland ay u soo bixi weyday cayaaraha haweenka ee Canada ka dhacaya 2015-ka.
Waxay tiri: “Shakhsi ahaan, waa arrin aad u wanaagsan in la ii aqoonsado ka qeyb galka tartanka iyo tirada cayaartooyda magaca leh ee dunida iyo horyaalka Mareykankaba ka jira.”